Wariye iyo macalin lagu dhaawacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Kooxo hubeysan oo wata gaari ayaa maanta Muqdisho ku dhaawacay wariye ka tirsnaa telefishinka af-Soomaaliga ku hadla ee Somali Channel iyo macallin ka tirsanaa kuwa wax ka dhiga jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Wariye C/risaaq Jaamac Cilmi (Black) oo ahaa agaasimaha TV-ga Somali Chanel xafiiskisa Muqdisho iyo macallinka oo Maxamed Yuusuf lagu magacaabo ayaa lagu weeraray illinka hore ee gurigiisa, iyadoo aan la ogeyn weli sababta keentay in kooxahan hubeysan ay weeraraan wariyaha iyo ruuxa la joogay ee macallinka ahaa.
“Xalay wariyuhu xafiiska ayuu seexday oo shaqo ayuu ku jiray, dhowr jeer ayaan saaka wada-hadalnay waana wanaagsanaa, balse ruux nasoo wacay ayaa inoo sheegay inuu Black dhaawac yahay, isbitaalkana la dhigay, markii aan isbitaalka nimidna waxaa naloo sheegay inuu ka dhaawacan yahay mid ka mid ah gacmihiisa iyo caloosha,” ayuu yiri Muuse Jiisoow oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala xafiiska Somali Channel ee Muqdsiho.
Muuse Jiisoow ayaa sheegay in wariyaha lagu sameynayo qalliin, isagoo xusay inaysan garanayn sababta ka dambeysa ee la weeraro wariyaha iyo ruuxa la joogay ee macallinka ahaa oo labadaba lagu daweynayo isbitaalka Madiina ee Muqdisho.
“Innagu ma garan karno sababta loo beegsaday, waayo wariye Black ma ahayn nin labada dhinac wax ka sheegi jiray, waxaan u maleynayaa inay qayb ka tahay ugaarsiga lagu hayo suxufiyiinta oo midba maalin la dilayo,” ayuu mar kale yiri Jiisoow.
Dhakhaatiirta isbitaalka Madiina ayaa sheegay in xaalada wariyaha ay aad u culus tahay, balse ay dadaalayaan.
Weerarka lagu qaaday wariyaha ayaa ka dhacay xaafadda Black Sea oo ku dhow Suuqa Bakaaraha.